ललितपुरमा कोरोनाबाट तेस्रो व्यक्तिको मृत्यु « Naya Page
प्रकाशित मिति : 29 June, 2020 10:42 pm
ललितपुर जिल्लामा कोरोना सङ्क्रमणबाट तेस्रो व्यक्तिको मृत्यु भएको छ । सानेपाको स्टार अस्पतालमा उपचाररत रौतहट हतुवा विजयपुर नगरपालिकाका वडा नं ७ निवासी ३० वर्षीय पुरुषको शनिबार राति आठ बजेर ४० मिनेटमा मृत्यु भएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय ललितपुरका प्रमुख डा जागेश्वर गेलालले बताए ।
ती व्यक्तिले काठमाडौँ आउनुअघि तराईको अस्पतालमा छातीको उपचार गराइरहेको गेलालको भनाइ छ । उनको उपचारमा खटिने र परिवारका सदस्य गरी आठदेखि नौजनालाई हाल आइसोलेशनमा राखिएको उनले बताए ।
यसअघि ललितपुरमा कोरोनाका कारण अन्य दुई पुरुषको पनि मृत्यु भइसकेको छ । आजसम्म ललितपुरका नौ जनालाई कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ । ती व्यक्तिको शव व्यवस्थापन भने नेपाली सेनाले गर्ने छ ।
नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका थप ४७६ मध्ये आठ जना काठमाडौं उपत्यकाका हुन् । पछिल्लो २४ घण्टामा देशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणका क्रममा थप ४७६ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पोजेटिभ देखिएको हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार ४७६ जनामा संक्रमण देखिएको हो ।
आज थपिएका ४७६ सहित नेपालमा संक्रमितको संख्या १३ हजार २४८ पुगेको छ ।
पछिल्लो २४ घण्टामा थप १२१ जना उपचारपछि निको भएर डिस्चार्ज भएका छन् । योसहित डिस्चार्ज हुनेको संख्या ३,१३४ पुगेको छ । कूल संक्रमितमध्ये २८ जनाको मृत्यु भएको छ । प्रवक्ता डा. गौतमका अनुसार हालसम्म देशका सबै जिल्लामा संक्रमण देखिएको छ ।